Plugin WordPress Clicky miaraka amin'ny Admin Navoaka | Martech Zone
Alakamisy, Jona 14, 2007 Alarobia, Jolay 4, 2007 Douglas Karr
Clicky mamy tsara tarehy Analytics fampiharana izay misy dikany bebe kokoa amin'ny mpampiasa fototra noho ny zazalahy lehibe rehetra any. Heveriko fa ny tsena kely dia akany lehibe ary tokony hanana azy tsy ho ela i Clicky - nahazo a interface tsara, sary mahafinaritra, ary ny vaovao asehony dia tonga lafatra ho an'ny bilaogera antonony.
Fotoana fohy taorian'izay, Clicky dia namoaka WordPress Plugin hampiditra Clicky ao amin'ny WordPress. Sean dia nanao fanamarihana tao amin'ny pejy Goodie fa tsy dia fantany loatra ny momba ny WordPress ary te ho nanangana pejy hitantanana ilay rindranasa avy ao anatin'ny interface Admin WordPress izy, saingy tsy fantany ny fomba tamin'izany. Tena nahagaga ahy ny asa efa vita tao amin'ny Clicky ka navelako andalana izy ireo hahitana raha afaka manampy aho. 'Azo antoka' ny valiny!
Tao anatin'ny ora vitsivitsy tamin'io faran'ny herinandro io dia nanangana pejy admin tena tsara aho izay nanana ny fiasa ilaina rehetra. Nitafy azy i Sean ary nitafy azy (tsara) kokoa ho an'i Clicky ary manana namoaka azy androany! Matetika ianao dia tsy mahita fotoana ahafahana manampy toy izao - fa tena tiako ny hahita fampiharana toa an'i Clicky raisina an-tanana. Izay no atao hoe fiaraha-miasa amin'ny open source, sa tsy ?!
Alao ny tenanao a Analytics amin'ny Clicky Web kaonty ary alao ny Plugin WordPress Clicky.
Jun 14, 2007 ao amin'ny 5: 02 PM
Nanana olana vitsivitsy azo itokisana aho tamin'ny fahazoana volana vitsivitsy lasa izay saingy toa nalamin'izy ireo daholo izany ary niverina nampiasa azy io. Raha ny marina dia nanao sonia ny fonosana 'bilaogin'izy ireo aho' izay $ 19 isan-taona dia manome anao statistaly feno amin'ny bilaogy 3 izay heveriko fa fifampiraharahana.
Tena hanandrana ilay plugin aho.
15 Jun 2007 amin'ny 1:56 AM
Asa tsara hafa Doug. Lasa pro kely ianao izao amin'ny plugins WordPress 🙂